အာကာသထဲကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ သနားစရာ ခွေးမလေးရဲ့ဘ၀ - နည်းပညာချစ်သူ
အာကာသထဲကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆိုရင် မျောက်ကလေး Albert II နဲ့ ချင်ပန်ဇီ Ham လို့ သင်ဖြေကောင်းဖြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းရောက်ခဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်ကတော့ ခွေးမလေး Laika ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသထဲကို ပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ သက်ရှိဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
တကယ်တော့ခွေးမလေး Laika ဟာ မော်စကိုမြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်က လေလွင့်ခွေးလေး တစ်ကောင်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၅၇ခုနှစ် မှာ သူ့ကို ဆိုဗီယက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သမိုင်းတွင်မယ့် အကာသခရီးအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ရရှားအာကာသယာဉ်မှူး ယူရီဂါဂါရင် မတိုင်မီ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ စမ်းသပ်ချက်ပါ။
ယူရီဂါဂါရင်ဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ အာကာသ ထဲကို ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတာကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ခွေးမလေးအတွက် အိမ်ပြန်ဖို့အစီအစဉ်မပါရှိခဲ့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခွေးမလေးဟာ သိပ္ပံပညာအတွက် အစမ်းသပ်ခံ ယဇ်ကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ဟာ ပထမဆုံးလူလုပ်ဂြိုလ်တု တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Sputnik 1 ကို လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်လအကြာ ဗော်ရှိဘစ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး နှစ် ၄၀ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကတော့ Sputnik2ကို သက်ရှိ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နဲ့ အတူ အာကာသထဲကိုလွှတ်ဖို့ပါပဲ။
ဒီအတွက် ခွေးမလေး Laika ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ လေလွင့်ခွေးဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုဒါဏ်တွေ နဲ့ ဆာလောင်မှုဒါဏ်တွေကို ခံနိုင်ရည် ရှိပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ခွေးမလေးကို လှောင်အိမ်သေးသေးလေးတစ်ခုထဲမှာထားကာ ဒုံးပျံကဲ့သို့အမြန်နှုန်းရှိတဲ့စက်တစ်ခုနဲ့ မကြာခဏ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Sputnik2ထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ထုတ်စက် နဲ့ ပန်ကာတစ်ခုတို့ပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ခွေးမလေးကိုတော့ တစ်ပတ်စာခံနိုင်မယ့် အဟာရဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒုံးပျံမလွှတ်မီမှာ သိပ္ပံပညာရှင်ထဲကတစ်ယောက်ဟာ ခွေးမလေးကို သူ့အိမ်ခေါ်သွားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကလေးနဲ့ဆော့စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတည်းက သူမဟာ ကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ သိခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။
၁၉၅၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ Sputnik2ကိုလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အကာသလမ်းကြောင်းထဲမှာ ဒုံးပျံထိပ်ဖူးကို မှန်ကန်စွာ ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အပူပေးစနစ်ဟာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ခွေးမလေးဟာ ပျံသန်းချိန် ၅ နာရီ နဲ့ ၇နာရီ အကြားမှာ အပူဒါဏ်မြင့်မားမှုကြောင့် သေဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
5th November 1957: Laika, the Soviet Satellite dog in the specially designed space equipment in Sputnik II. The capsule will probably burn up on re-entry. (Photo by Keystone/Getty Images)
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ Laika ဟာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားပြီးနောက် ညှင်ညှင်သာသာသေဆုံးသွားတယ် လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။1
လူသားတို့ရဲ့ အာကာသခရီးအတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ ခွေးမလေး Laika ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူမလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ အထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အိပ်ရာထဲမှာ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့သူများ ဖတ်ကြည့်ပါ။
သင့်​ရဲ့ ဖုန်းအ​ဟောင်းကို အသစ်​ပြန်​ဖြစ်​​စေဖို့ နည်းလမ်း ၇ ချက်​
Samsung Phone အတုအစစ် ဘယ်လိုခွဲမလဲ
သင်သိသင့်တဲ့ Xiaomi ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ
အာကာသမှ လာတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားများကို တွေ့ရှိ
အနောက်ဘက် ကင်မရာ နှစ်လုံးကို ဒေါင်လိုက်ပုံစံ သုံးသွားဖို့ ရှိတဲ့Redmin Note 5
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တစ်လအတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နာရီငါးသိန်းကျော်ရှိဟု အူရီးဒူးထုတ်ပြန်
Messengerမှာ ပြောထားတဲ့ စာအားလုံး ဖျက်နည်း။